Mpanohana platinum voalohany an'ny Airbnb ho an'ny kaonferansa manerantany
Home » Travel Associations News » Mpanohana platinum voalohany an'ny Airbnb ho an'ny kaonferansa manerantany
Aogositra 24, 2017
Toeram-pivarotana an-tserasera sy serivisy fandraisam-bahiny Airbnb dia nanolotra vola mitentina $ 8.3 tapitrisa ho an'ny Governemantan'i Jamaika, tamin'ny fananganana ny UNWTO, GOJ, World Bank Group Conference momba ny asa & ny fitomboana: fiaraha-miasa ho an'ny fizahan-tany maharitra.
Izany no mahatonga ny orinasa mega-teknolojia mpanohana platinum voalohany amin'ny kaonferansa, izay kasaina hatao amin'ny 27-29 Novambra, ao amin'ny Montego Bay Convention Center, St. James.
Minisitry ny fizahantany, Hon. Nankasitraka ity mpanohana ity i Edmund Bartlett, nizara fa hanamafy ny vinavinan'ny valandresaka ho amin'ny hoavin'ny sehatry ny fizahantany ao Jamaika.
“Ity fihaonambe ity dia tsy ho hetsika fizahan-tany iraisampirenena tokana lehibe indrindra natao teto amin'ny tany teo an-toerana fa ho iray amin'ireo hetsika lehibe indrindra natao tamin'ny tantaran'ny firenena. Faly be aho fa manana ny Airbnb ao anaty sambo ary manantena ny hiara-hiasa amin'izy ireo amin'ny tetikasa maro samihafa izay azoko antoka fa hahasoa ny mponin'i Jamaika ato ho ato, ”hoy ny minisitra Bartlett.
Minisitry ny fizahantany, Hon. Edmund Bartlett (havanana faharoa) dia niresaka tamin'ny mpitantana ny Airbnb nandritra ny fivoriana vao haingana tao amin'ny foiben'izy ireo tany San Francisco, Etazonia, ny 24 Aogositra 2017. Ny fizarana ny dinika dia (avy eo ankavanana) Lehiben'ny politika sy raharaha momba ny raharaham-bahoakan'i Airbnb, Carlos Muñoz; Ny talem-paritry ny politikam-bahoaka an'ny Airbnb ho an'i Amerika afovoany sy Karaiba, Shawn Sullivan; Lehiben'ny tetik'asa momba ny fiarovana stratejika ataon'ny Airbnb, Clark Stevens; Lehiben'ny politika sy serasera eraky ny Airbnb, Chris Lehane; Mpanolotsaina zokiolona / Strategista momba ny serasera an'ny Minisiteran'ny Fizahan-tany, Delano Seiveright ary ny konsily homem-boninahitra an'i Jamaika ho an'i Los Angeles, Lorna Mae Johnson. Nandritra ny fihaonana, Airbnb dia nanolotra $ 8.3 tapitrisa ($ US $ 65) ho an'ny Governemantan'i Jamaika, ho amin'ny fampisehoana ny UNWTO, GOJ, World Bank Group Conference an'ny Jobs & Inclusive Growth: Fiaraha-miasa ho an'ny fizahan-tany maharitra, ka nahatonga azy ireo ho platinum voalohany mpanohana ny hetsika. Ny fihaonambe dia voalahatra amin'ny 27-29 Novambra, ao amin'ny Montego Bay Convention Center, St. James.
Ny talem-paritry ny Airbnb any Amerika Afovoany sy Karaiba, Shawn Sullivan, dia nanome ny fanoloran-tenany ho an'ny Minisitra Bartlett nandritra ny fivoriana tao amin'ny foiben-toeran'ny California any California tamin'ny 23 Aogositra 2017.
“Andro tsara ho an'ny Airbnb androany. Dingana iray hafa tao aminay ny fanamafisana sy ny fanaovana izay hisongadinana kokoa, ny fifandraisantsika amin'ny Governemantan'i Jamaika. Airbnb dia mahita an'i Jamaika ho toerana voalohany any Karaiba sy manerantany, ”hoy Andriamatoa Sullivan.
Airbnb dia tsenan'ny vondrom-piarahamonina atokisana ahafahan'ny olona mitanisa, mahita ary mamandrika trano tsy manam-paharoa manerantany. Mampifandray ny olona amin'ny traikefa fitsangatsanganana tsy manam-paharoa, na oviana na vidiny, any amin'ny tanàna maherin'ny 34,000 sy firenena 191.
Ny tsenan'i Airbnb any Jamaika dia mitombo haingana ary mampidi-bola izaitsizy. Ny tranonkalany amin'izao fotoana izao dia mirehareha mpampiantrano mavitrika sy lisitra mavitrika eo an-toerana. Niarahaba mpitsidika 32,000 mahery ihany koa i Jamaika tamin'ny alàlan'ny Airbnb tamin'ny taon-dasa, nahazo tombony ireo vondrom-piarahamonina maro manerana ny nosy, ao anatin'izany ny Trench Town ao Kingston, ary manome fidiram-bola ho an'ny tompon-trano maro.
Ny minisitra dia any California ankehitriny, ary antenaina koa fa handray anjara amin'ny fivoriana stratejika miaraka amin'ireo orinasa mega teknolojia amerikanina Google, LinkedIn Corporation ary Uber Technologies Inc.
Ny fihaonana dia miaraka amin'ny roa amin'ireo poujika stratejika dimy an'ny Minisitra - ny fananganana vokatra vaovao ary ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa vaovao; ary hampiasaina ihany koa hampiroborobo ny UNWTO, GOJ, Fihaonamben'ny Vondrona Iraisam-pirenena momba ny asa sy ny fitomboana: fiaraha-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany maharitra, voalahatra ny 27 - 29 Novambra, ao amin'ny Montego Bay Convention Center.
Manatevin-daharana azy ny mpanolotsaina zokiolona / stratejista momba ny fifandraisana, Delano Seiveright ary ny Consul manan-kaja ao Jamaika any Los Angeles, Lorna Mae Johnson. Antenaina hiverina any amin'ny nosy izy amin'ny 27 aogositra 2017.
SARY: Serivisy fandraisam-bahiny an-tserasera Airbnb dia nanolotra $ 8.3 tapitrisa ($ US $ 65) ho an'ny Governemantan'i Jamaika tamin'ny fametrahana ny UNWTO, GOJ, World Bank Group Conference momba ny asa sy ny fitomboana: fiaraha-miasa ho an'ny fizahan-tany maharitra, ka izy ireo no voalohany mpanohana platinum ho an'ny hetsika. Ny sonia dia natao tao amin'ny foiben'izy ireo tany San Francisco, Etazonia, ny 24 aogositra 2017. Taorian'ny fanaovan-tsonia, ny minisitry ny fizahan-tany, Hon. Edmund Bartlett (mipetraka ankavia) dia mandray tànana amin'ny Lehiben'ny politika sy serasera eraky ny Airbnb, Chris Lehane. Ny fizarana amin'izao fotoana izao dia (avy amin'ny ankavia) Mpanolotsaina zokiolona / Strategiste an'ny Serasera ao amin'ny Minisiteran'ny Fizahan-tany, Delano Seiveright; Consul Honorary ho an'i Los Angeles, Lorna Mae Johnson; Ny talem-paritry ny politikam-bahoaka an'ny Airbnb ho an'i Amerika afovoany sy Karaiba, Shawn Sullivan; Lehiben'ny politika sy raharaham-panjakana an'ny Airbnb, Carlos Muñoz; ary mpandrindra ny fiaraha-miasa Airbnb's, Alison Jordan.